Mhando dzipi dzekutsanya dzirimo mubhaibheri ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Mhando dzipi dzekutsanya dziripo muBhaibheri? El kutsanya chiito icho isu tinorega kudya kana kunwa kwenguva yakatarwa. Kubva pamaonero ebhaibheri, inotibatsira kubatana nenzira yekunamata naMwari. Nekudaro, kunyangwe chero munhu achigona kutsanya, kana uine chero matambudziko ehutano kana uine pamuviri, bvunza chiremba wako usati waita, nekuti chinhu chekupedzisira chinodiwa naMwari ndechekuti uparadze hutano hwako.
Bhaibheri rinotiratidza matatu marudzi makuru ekutsanya:
Iko kune yakazara
Kune rimwe divi, inotaurawo nezve mamwe marudzi ekubvisa.
1 Mhando dzipi dzekutsanya dzirimo mubhaibheri uye kuti ungazviita sei
1.1 1. Kutsanya kwakazara
1.2 2. Kutsanya kwemvura
1.3 3. Kutsanya zvishoma kana Daniel kutsanya
1.4 4. Zvimwe zvirevo
Mhando dzipi dzekutsanya dzirimo mubhaibheri uye kuti ungazviita sei
1. Kutsanya kwakazara
El kutsanya yakazara inoreva rudzi rwekutsanya urimo haugoni kudya kana kunwa chero chinhu. Rudzi urwu rwekutsanya rwakanyanya kunyanyisa uye haifanire kudzidziswa kweanopfuura mazuva maviri kana matatu, sezvo kushandisa nguva yakareba mukutsanya kwakazara kunogona kukuvadza zvakanyanya hutano hwako uye kutokonzeresa rufu. Saka chenjera. Kurwara hakupi mbiri kuna Mwari.
Ipapo Esiteri akatuma mhinduro iyi kuna Modhekai, akati, Enda undounganidza vaJudha vose vari paShushani, uye munditsanye. Usadya kana kunwa kwemazuva matatu neusiku hutatu. Ini nevaranda vangu tichatsanya semi. Mushure maizvozvo ndichaenda kuna mambo, kunyangwe zvisiri pamutemo. Kana ndichifanira kufa, ndichafa ”. Esteri 4 15:16
2. Kutsanya kwemvura
Rudzi urwu rwekutsanya rwakanyanya uye rwunogona kuve dzidzira kwenguva yakareba. Seizvo zita rayo rinoratidza, Haugoni kudya chero chinhu, asi unogona kunwa mvura.
Izvi zvinogona kunge zviri izvo kutsanya kwakaitwa naJesu mukati memazuva ake makumi mana murenje.
Kana kutsanya kuri kuenda yekupedzisira kupfuura mazuva matatu, Zvinokurudzirwa zvakare inwa mamwe marudzi ezvinwiwa zvine shuga kuitira kuti muviri usatambura chero mhando yekudzokera shure. Zvinwiwa zvine shuga zvinobatsira kuchengetedza hutano panguva yekukurumidza kutsanya.
Ipapo Jesu akatungamirirwa neMweya kurenje kuti andoedzwa nako dhiabhori. Mushure mokunge atsanya kwamazuva makumi mana nousiku makumi mana, akanzwa nzara. (Mateo 4: 1-2)
3. Kutsanya zvishoma kana daniel nekukurumidza
Mukutsanya kusasarura zvikafu zvishoma chete zvinobviswa kubva mukudya. Izvo zvinokwanisika kudya, asi nenzira yakapusa. Inogona kugara kwenguva refu kupfuura maviri apfuura pasina kukuvadza hutano hwako.
Mukutsanya kusasarura unogona kusarudza kuti ndechipi chikafu chausingazodya kwechinguva. Senguva dzose, kazhinji inogadzira chikafu chinonaka kana chakakosha. Iyo inodonha mu kudya kwakasimba kwaunongodya kuti urarame. Kune rimwe divi, iyi mhando yekutsanya iri yakachengeteka kune vanhu vane imwe mhando ye dambudziko rehutano.
Panguva iyoyo ini, Daniel, ndakapedza vhiki nhatu ndichichema. Handina kudya chinhu chinonaka; nyama newaini zvandisina kana kumboravira; uye ini handina kushandisa chero zvinonhuwirira kusvika vhiki nhatu dzapfuura. (Danieri 10: 2-3)
4. Zvimwe zvirevo
Sezvo kutsanya kwakavakirwa pakubviswa kwevamwe mafaro ekuti vawane kukurukurirana kukuru neMweya, kurega mafaro epabonde, zvinonhuwira, kana nguva yekuzorora zvinogona zvakare kutariswa sekutsanya kwaMwari.
MuBhaibheri tinogona kuona kuti sei Danieri akarega kushandisa pefiyumu kana semunavaKorinde kune kutaura kwekugona kwekurega bonde kushandisa nguva yakawanda mukunamata kwenguva pfupi.
Musarambisane, kunze kwekunge muchiwirirana uye kwenguva, kuzvipira kumunamato. Wobva wabatana zvakare, kuti Satani arege kukuyedza nekuda kwekushaya kuzvidzora. VaKorinde 1: 7-5
Kana iwe uine dambudziko rehutano rinoda kudya kwakasimba, rudzi urwu rwekutsanya inzira yakanaka. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve wakangwarira nezve sarudza chimwe chinhu chisingakanganise hupenyu hwevamwe vanhu. Semuenzaniso, mune iyo kesi ye kusangana pabonde, kutsanya uku inofanirwa kuve nemvumo yemurume kana mukadzi.
Iwe unogona kusanganisa iyi mhando yekutsanya nechikafu chinokurumidza kana uchida. Iko hakuna yakaoma uye inokurumidza mitemo. Paunosarudza kutsanya, sarudza iyo mhando yekutsanya inokodzera mamiriro ako zvakanyanya uye kuigadzirisa kuti utore nguva yako naMwari.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chakubatsira kuti unzwisise Mhando dzipi dzekutsanya dzirimo mubhaibheri uye ndedzei?. Uye ikozvino iwe unoda kudzidza ku kukunda kutya rufu, kuongorora tsvaga.online.